Ukusebenza Ngaphandle: Ngawaphi amazwe anesantya esiphezulu sefayibha? | Ukuhamba kwe-Absolut
Asisacingi ngowethu ubomi ngaphandle kwe-intanethi, hayi ekhaya okanye kwiselfowuni yethu. Ukuthenga kwi-ecommerce, i-teleworking, ukukhangela iinethiwekhi zentlalo, ukubukela imidlalo ebukhoma okanye uthotho lwemidlalo yeminye yemisebenzi yemihla ngemihla esiyenzayo ngoku kwaye kude kube kudala kubonakala ngathi ukude. Kodwa ukuze ukwazi ukwenza konke oku, kuyimfuneko ukuba nesantya esilungileyo se-intanethi, Ngawaphi amazwe anesantya esiphezulu sefayibha ehlabathini?
Ngophando olwenziwe yiAmerican Ookla apho ilinganisa isantya sonxibelelwano lwe-Intanethi ngovavanyo lweSpeedTest, ngo-2021 ilizwe eline-intanethi ekhawulezayo esisigxina yiMonaco, kunye nesantya esiphakathi kwe-260 Mbps, ilandelwa yi-Asia yaseSingapore neHong Kong kunye ne-252 kunye ne-248 megabytes, ngokulandelanayo.
Kwinxalenye ye iselfowuni, zi United Arab Emirates ngubani phezulu kolu luhlu ngesantya 193 megabytes. Kwilizwekazi laseYurophu, iNorway (kwindawo yesine) lilizwe lokuqala phakathi kwale mida yesantya esiphantse sibe yi-167 Mbps.
ISpain ikwindawo esezantsi kuwo omabini la matyala. Ngokubhekiselele kwisantya esisisigxina se-intanethi ye-intanethi, ilizwe lethu likwindawo yeshumi elinesithathu kunye nesantya sokukhuphela i-avareji ye-194 Mbps. Kwimeko ye-intanethi ye-intanethi, i-Spain ibeka i-37 kunye ne-megabytes ye-59 kuphela. Ukuba ufuna ukwazi ukuba yeyiphi isantya se-intanethi endlwini yakho, sikushiya ezininzi uvavanyo lwesantya.
Bayanda abasebenzisi be-Intanethi abakhoyo emhlabeni. Eli nani linyuke laya kutsho malunga ne-4.665 yezigidi ngo-2020, ngokutsho kweManyano yoNxibelelwano lweZizwe ngezizwe. Kucingwa ukuba abemi behlabathi bazizigidi ezingama-7.841, ngaphezulu kwesiqingatha sabemi behlabathi (59,4%) basebenzisa i-intanethi kubomi babo bemihla ngemihla.
Kucacile ukuba intanethi Yiyo kumele kubomi babantu. Kwaye ukuba abasixeleli ngamnye wethu, oko kwaba yinto ebalulekileyo ekuvaleni. Nokuba ibikukwenza umnxeba wevidiyo nabahlobo bethu okanye ukonwabela imuvi nosapho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhamba kwe-Absolut » Ukusebenza phesheya: Ngawaphi amazwe awona manqanaba aphezulu efayibha?